Dad loo xirxiray banaan baxyadii looga soo horjeeday Shareecada Islaamka iyo Muslimiinta Mareykanka -
Waxaa maanta ka dhacay dhowr magaalo oo Mareykanka kamid ah banaanbaxyo looga soo horjeedo shareecada diinta Islaamka iyo Muslimiinta ku dhaqan dalka Mareykanka.
Urur la baxay Act for America ayaa soo qabanqaabiyey banaan baxan loo ama mudaharaadkan looga soo horjeedo Shareecada Islaamka iyo dadka Muslimiinta ah.
Magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa saaka waxaa ka dhacay laba banaan bax oo ay kala hogaaminayeen labo dhinac oo kala duwan. Qolyaha qabtay banaanbaxa looga soo horjeedo Shareecada Islaamka iyo dadka Muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa waxaa banaanbax ka garab qabtay dad ay tiradoodu gaareyso 300 oo qof oo iyagu difaacayey, taageerana u fidinayey Muslimiinta Mareykanka ah.
Haddaba banaanbixii ka dhacay Aqalka laga maamulo gobolka Minnesota ee ku yaala magaalada St. Paul ayaa waxaa ka dhacay xilaaf kalifay in dhowr qof la xiro. Waxaa la sheegayaa in ciidanka amaanka ee magaalada ST. Paul ay xireen 7 qof oo kamid ah xubnaha ama dadka aaminsan in shareecada Islaamku khatar ku tahay dadka iyo dalka Mareykanka ee iyagu banaanbaxa sameynayey.
Qofna wax kuma noqon khilaafka ama isku dhaca dhexmaray labada dhinac ee iyagu banaanbaxa kala duwan ku qabtay magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Laakiin qaar ka mid ah dadka iyagu waday heyb naceebka iyo eedaynta Muslimiinta ayaa waxaa xiray Ilaalada Aqalka looga arrimiyo gobolka Minnesota iyo Boliiska magaalada St. Paul.
Qaar kamid ah dadkii iyagu ku baananbaxayey Muslimiinta iyo Shareecada Islaamka ayaa watay boodhadh ay ku qoran yihiin oraahyo ay kamid yihiin, “ka soo horjeedso shareecada Islaamka,” “Shareecadu waa Jihaad,” “Islaamku Mareykan ma aha,” “Joojiya dadka Muslimiinta ah ee dalka Mareykanka u soo socdaalaya” iyo fariimo kale oo badan.
Sidoo kale, waxaa banaanbixii taageerayey Muslimiinta qudbado iyo hadalo kooban ka jeediyey qaar kamid ah culumada iyo hogaamiyeyaasha Muslimiinta gobolka Minnesota iyo dadkale oo iyagu u ololeeya arrimaha bulshadda. Dadka Muslimka ah ee iyagu goobta ka hadlay ayaa sheegay in aan nacayb aan meel lagu gaareynin, midnimaduna ay marwalba ka wanaagsantahay nacaybka.
Banaanbaxa looga soo horjeedo Muslimiinta iyo Shareecada Islaamka ayaa haddaba waa lagu tilmaamay in uu yahay mid ku saleysan heyb naceeb, isir naceeb iyo waliba diin naceyb.
Imamka iyo maamulka Masaajika Dacwa ee ku yaala magaalada St. Pual oo ah masaajidka ugu dhow goobtii uu banaanbaxu ka socday ayaa marti qaad u fidiyey dadkii iyagu soo qabanqaabiyey banaan baxa ama mudaharaadkan looga soo horjeedo Shareecada Islaamka iyo dadka Muslimiinta ah. Maamulka Masaajidka Dacwa ayaa sheegay in Diinta Islaamku ay tahay diin nabad, dadka Muslimiinta ahina ay yihiin dad Mareykan ah oo nabada iyo wanaaga mar walba jecel.
Qaarkamid ah masaajidada, Hay’addaha Muslimiinta iyo Soomaalida ee bulshadda u adeega, Ururada Iskaashiga shaqaalaha iyo bulsho weynta reer Minnesota ayaa haddaba iyagu go’aan ku gaaray in jawaabta ugu wanaagsan ee loogu jawaabi karo dadkan iyagu ku banaanbaxaya Muslimiinta ay tahay in ay qabtaan kulan qof walba u furan oo lagu Afurayo.
Xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa maanta lagu qabanayaa Afur aad u weyn oo loogu magac daray Afurka Midnimadda (Unity Iftar). Kulankan lagu Afurayo ayaa lagu qabanayaa jidka weyn ee Cedar, waxaana la xiray wadooyin waaweyn si banaanka loogu afuro, looguna tukado.
Xigashada sawirrada: Wargeyska StarTribune
Related Items:Featured, local, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis, Somali News
Wiil Soomaali ah oo lagu toogtay magaalada Minneapolis